के हामी सपना रोकाको मृत्यु कुरेर बसेको हो ? सामाजिक सञ्जालमा अति भैसक्यो, कहिले बोल्ने हामी ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाज/के हामी सपना रोकाको मृत्यु कुरेर बसेको हो ? सामाजिक सञ्जालमा अति भैसक्यो, कहिले बोल्ने हामी ?
काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लक्षित गरेर आन्दोलनरत नेकपाकी नेता रामकुमारी झाँक्रीले दिएको अभिब्यक्तिका कारण महिला अधिकारका क्षेत्रमा लागेकाहरु सामाजिक सञ्जालमा कराए । अखिल नेपाल महिला संघले राष्ट्रपति विरुद्ध अभिब्यक्ति दिनेलाई कारवाहीको माग गर्दै गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझायो ।
रामकुमारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा निकै द वा व परेपछि उनी पक्राउ परिन् । अहिले सडकमा महिला हिँ सा विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन र नारावाजी पनि भइरहेका छन् । तर एक १९ वर्षकी किशोरी ‘मलाई देह त्याग गर्न बाध्य पारिदैछ मैले न्याय पाइन’ भनेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोगको माग गर्दा समेत उनका बारेमा बोलिदिने एक जना पनि देखिएको छैन ।
बीबीसीमा विश्वका शक्तिशाली १०० महिलाको लिष्टमा परेकी वेवारिसे शव ब्यवस्थापनकी अभियन्ता सपना रोका मगरको च रि त्र उ’छा ल्दै अहिले धेरै युट्युवरहरुले आफ्नो कमाउने माध्यम बनाएका छन् । तिनै युट्युवरलाई मसला दिन धेरै सामाजिक अभियन्ता नामका ब्यक्तिहरुले आफुलाई चर्चामा ल्याउने मौका पाएका छन् । दिनहुँ युट्युवहरुमा सुन्न नसकिने शब्द प्रयोग गर्दै उनी माथि चरम मानसिक या त ना दिइएको छ ।
१९ वर्षको उमेरमै यति धेरै त ना व झेल्न परेकी सपनालाई साथ दिने अहिले सम्म एक जना पनि उभिएको देखिदैन । घटना भएपछि मात्र विज्ञप्ती निकालेर र सडकमा नारा लगाएर आफ्नो कर्तब्य पुरा भएको सम्झने महिला अधिकारकर्मी समेत यो विषयमा चुपचाप बस्नु निकै उदेक लाग्दो देखिएको छ ।
युटुब, टिकटक, फेसबुकमा ती किशोरीको जसरी अ श्ली ल टिप्पणी गरिएका छन् यो विषय सामान्य श्रीमान श्रीमतीको घर झ ग डा भन्दा विल्कुलै भिन्न विषय हो भन्ने कुरा तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिएको छैन । ‘प्रहरी कार्यालय धाउँदा पनि मैले न्याय पाइन’ भनेर आफ्नो विवशता देखाएकी सपनालाई साथ दिन ढिलो भइसकेको छ । किशोरी माथि भएको यस्तो सा मा जिक अ प रा धको विषयलाई पनि सम्बेदनशिल ढंगले अनुसन्धान नगर्ने प्रहरी प्रशासनलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।
छोरी भन्दै सार्वजनिक रुपमा खुट्टा ढोग्ने विनयजंग बस्नेतले युट्युव र सामाजिक सञ्जालमा ‘सपनाको नां गो तस्बिर म संग छ सार्वजनिक गरिदिन्छु’ भन्दै सिधै यौ’ ‘न ज न्य हिं ‘सा गर्ने र सामाजिक अभियन्ताको नाममा ‘सपना हाम्रा सामु आउनुपर्छ उसलाई तमासा बनाउनु पाउनुपर्छ’ भन्दै युट्युवमा फलाक्नेहरुलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
हिं सामा परेकी सपनालाई नै ‘च रि त्र खराब छ, विनयजंगसंगको सम्बन्ध हाम्रा सामु खुलाउनुपर्छ’ भन्दै दिनहुँ युट्युववमा कराउने सामाजिक अभियन्ता नामका ब्यक्तिहरुका कारण पनि अहिले यो घटना यसरी छताछुल्ल भएको छ । यस्ता घटनामा जसले पनि प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने, प्रकृयामा गएर छानविनको माग गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सपना हाम्रा सामु आउनुपर्छ भन्दै युट्युववमा फलाक्नुको अर्थ आफु चर्चामा आउने एउटा माध्यम मात्र हो ।
अर्काको नितान्त नीजि विषयहरुलाई युट्युव र सामाजिक सञ्जालका समाचार बनाइने गरेका कारण अनावश्यक रुपमा हरेक विषयमा टिप्पणी गर्ने, कुतर्क गर्ने र विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरु जन्मिएका छन् । श्रीमान श्रीमतीको घटना देखि महिला र किशोरीका च रि त्रका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गर्ने सामाजिक अभियन्ता धा रीलाई पनि सचेत गराउनु जरुरी देखिएको छ ।